Mayelana Graphic Security Systems Corporation | GSSC
I-GRAPHIC SECURITY SYSTEMS CORPORATION (GSSC)
I-GSSC yinkampani yobuchwepheshe elwa nokukhwabanisa ehlinzeka ngezokuphepha kwemibhalo yesimanje nezisombululo zokuvikela umkhiqizo.. GSSC ngokukhethekile tisombululo ngokwezifiso ehambisana ukuthi komthungo angena design nokuphepha ingqalasizinda yakho ekhona.
Advanced emagama optical, kanye lula-the-spot smartphone ubuqiniso, ezinye izizathu ukuthi izici GSSC ezisetshenziswa izigidigidi imikhiqizo brand kanye imibhalo emhlabeni wonke. GSSC uye wanikeza lobunikazi security ezobuchwepheshe uhulumeni wagunyaza security zokunyathelisa amafemu kanye izinkampani ezinkulu for phezu 40 Eminyakeni.
Alfred V. Alasia, Umsunguli yethu nomsunguli nelungelo lobunikazi ngiyocasha inqubo Indicia® in the maphakathi 70 futhi waphayona the inzuzo buchwepheshe for mbhalo security and ubuqiniso umkhiqizo. Kusuka lapho, Imisebenzi ucwaningo olunzulu GSSC BakaJehova baye kwaholela imikhiqizo emisha eminingi kanye amaphathenti ngazo ukuba kwaluqinisa kuphela isikhundla yenkampani linesikhathi eside likhona njengenhlangano umholi imboni emkhakheni zokunyathelisa security.
© 2022 Wonke Amalungelo Agodliwe.